उफ् मोटोपन ! घट्दै–घटेन - पब्लिक समाचार
४ महिना अगाडि / ११९ पटक हेरिएको
यसको केही सरल सर्त छन् । जस्तो कि, तपाईंले ऐशआरम त्याग्नुपर्छ । मीठोमसिनो खानेकुरामा लोभ गर्नु भएन । जंकफूड, प्रशोधित खानेकुरा, मदिरा वा मसुमा मरिहत्ते गर्नुभएन । व्यायाम गर्नुहोस्, शारीरिक श्रम गर्नुहोस्, पर्याप्त पानी पिउनुहोस्, एकै पटक पेट चर्कनेगरी खानेकुरा नखानुहोस्, पैदल हिँड्नमा जोड गर्नुहोस्, खानामा सलाद र सागसब्जीलाई महत्व दिनुहोस् । यति गर्दापनि मोटोपन घटेन रु
कतिपय मानिसमा तौल नियन्त्रण गर्नु यसकारण गाह्रो हुन्छ, उनीहरु जानेर वा नजानेर धेरै क्यालोरी ग्रहण गर्छन । त्यसैले कुनैपनि खानेकुरा सेवन गर्नुअघि त्यसले शरीरमा क्यालोरीको मात्रा बढाउँछ कि रु सर्तक हुनुपर्छ ।
तपाईं कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? यो प्रश्न तपाईंलाई असान्दर्भिक लाग्न सक्छ । र, भन्नुहोला, ‘मोटोपन घटाउने कुरामा निन्द्राको के नाता रु’